“कमटेकमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं”– बिश्वराम बलामी (महासचिव, क्यान महासंघ)
“कमटेकमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं”– बिश्वराम बलामी (महासचिव, क्यान महासंघ)	By नवीन सन्देश on	२१ भाद्र २०७३, मंगलवार ०९:४४
काठमाडौँ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आगामी भदौ २३ गतेदेखि ‘क्यान कमटेक २०१६’ प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको छ । प्रबिधिको पछिल्लो संस्करणका बारेमा जानकारी दिन र प्रबिधिजन्य सबै उत्पादनहरु एकै छानामूनि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा क्यान कमटेक आयोजना गर्न लागेको हो ।
विगतमा क्यान ईन्फोटेक र क्यान सफ्टटेक आयोजना गर्दै आएको महासंघले पहिलो पटक क्यान कमटेक आयोजना गर्न लागेको हो । त्यसैले पनि कमटेकको बारेमा चौतर्फी जिज्ञासा बढ्दो छ । क्यान कमटेकको तयारी, आवश्यकता र महत्वका साथै नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा क्यान महासंघले खेल्ने भूमिकाका वारेमा महासंघका महासचिव बिश्वराम बलामीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
क्यान महासंघले क्यान ईन्फोटेक र क्यान सफ्टटेक गर्दै आईरहेको थियो । अब यो क्यान कमटेकको आवश्यकता चाँही किन ?
तपाईको कुरा एकदम सही हो । क्यान महासंघले विगतदेखि नै क्यान ईन्फोटेक र क्यान सफ्टटेक आयोजना गर्दै आएको छ । तर समय अनुसार प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि हामीले यो नयाँ प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं । यसको मतलब क्यान इन्फोटेक र सफ्टटेक नहुने होईन । यी सबै प्रदर्शनीहरु नियमित रुपमा जारी रहन्छ ।
क्यान ईन्फोटेक र क्यान कमटेकमा फरक चाँही के त ?
क्यान इन्फोटेक सवै प्रविधिजन्य उत्पादन तथा सेवाहरुको कुम्भमेला हो भने क्यान कमटेक चाँही विशेष गरी ईन्टरनेटहरुको कुम्भमेला हो । यसो भन्दैमा इन्टरनेटहरुको मात्रै भन्ने होईन । कमटेकमा पनि प्रविधिका सवै स्टलहरु हुनेछन् । कमटेकमा विशेष गरी ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट र कम्प्युनिकेशन टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
नेपालमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा पनि ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको माग र आकर्षण बढ्दो छ । नेपाल टेलिकमले पनि पछिल्लो समय ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटलाई जोड दिएको छ । बिश्वमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको तिव्रतर माग भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि यसको विस्तार गर्न आवश्यक देखेर नै कमटेकमा विशेषरुपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
प्रदर्शनीको तयारी कस्तो छ ?
हामीले अवलोकनकर्ता र स्टल राख्ने सबैलाई सक्दो सुविधा दिने किसिमले तयारी गरेका छौं । प्रदर्शनीलाई सभ्य, भब्य र ब्यवस्थित बनाउने तयारीका साथ हामी जुटिरहेका छौ ।
कमटेकमा कति स्टल रहने छन ?
क्यान कमटेकमा साना ठूला गरि ८१ वटा स्टल रहने छन् । सेक्यूरिटी सोलुशन्स कम्पनीहरुका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरेका छौं । त्यो प्रिभिलियनमा इलेक्टिोनिक सेक्यूरिटी तथा सेफ्टी सोलुसन्सका उपकरणहरु हुनेछन । जस्तै सिसिटिभी, एक्सेस कन्ट्रोल सिष्टम, सेन्सर र अलार्म, एटेन्टेन्स, फायर डिटेक्टर इत्यादि रहनेछन ।
अवलोकनकर्ताहरुलाई के कस्तो सुविधा छ ?
अवलोकनकर्ताहरुले निर्धक्क भएर प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न सक्नु हुन्छ । हामीले सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गरेका छौ । स्टलहरु अवलोकनका लागि पनि उचित किसिमको प्रवन्ध मिलाएका छौ । सर्वसाधारणहरुलाई प्रवेश शुल्क ५० रुपैंया र विद्यार्थीहरुलाई २५ रुपैंया तोकेका छौ । साथै कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थीहरु सम्बन्धित कलेज तथा स्कुलको पत्रसहित आएमा टिकट दरमा छुटको व्यवस्था गरेका छौ । सर्वसाधारणहरुले सबै किसिमका जानकारी एकै स्थानबाट सजिलै प्राप्त होस भनेर त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरेका छौ ।
कमटेकमा आउनेहरुले के कस्तो प्रविधिहरु बारेमा जान्न र किन्न पाउने छन ? कमटेकमा प्रविधिजन्य सवै सामाग्रीहरु उपलब्ध हुनेछ । ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशन्स्, इलेक्टोनिक्स, सेप्mटी एण्ड सोलुसन्स, हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् लगायतका स्टलहरु रहनेछन्् । सरकारले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटीको आधारभुत पूर्वाधार सम्बन्धी जानकारी यस प्रदर्शनीमा उपलब्ध हुने छ । ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विशेष सहुलियतसहितका प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्दैछन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि क्यान महासंघले के कस्तो कामहरु गर्दै आईरहेको छ ?
क्यान महासंघले विगत २४ वर्षदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विभिन्न सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठि, अन्तरक्रियाका साथै क्यान ईन्फोटेक, क्यान सफ्टेक, कन्फेरेन्सहरु आयोजना गर्दै आएको छ । साथै नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गर्दै आएको छ । प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढीरहेको छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको तिव्रतर विकासका लागि के गर्नु पर्ला ?
नेपालमा अहिले जे जति मात्रामा प्रविधिको विकास भएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु ल्याएर कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सके नेपालमा प्रविधि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्थ्यो । प्रविधिको विकास र विस्तार भनेकै समग्र मुलुकको विकास हो ।